Olee otú Play WMV na iTunes ọsọ ọsọ na mfe
Apụghị egwu WMV na iTunes? Yeah, iTunes bụghị enyi na enyi ngwa mgbe ọ na-abịa na-akpọ vidiyo na formats dị ka WMV wdg The iTunes akwado video formats naanị agụnye QuickTime na MPEG-4, onye faịlụ agwụ na ".mov", ".m4v", ma ọ bụ ". mp4 ". Na-emekarị, nanị mgbe a video nwere ike keere Apple onwe QuickTime ọkpụkpọ, ọ ike-atụkwasịkwara iTunes. N'ihi ya, ọ bụ ihe ezi uche dị iTunes ghara ịbụ dakọtara na WMV, a video format mepụtara Apple isi-ama - Microsoft.
Iji dozie nsogbu gị na-egwuri egwu WMV na iTunes, i kwesịrị iji tọghata WMV ka iTunes dakọtara usoro. Dị nnọọ na-n'okpuru WMV ka iTunes Ntụgharị n'okpuru.
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional WMV ka iTunes Ntụgharị
Part 2: Free WMV ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online WMV ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 4: FAQs banyere converting WMV ka iTunes
Nkwado 150+ Formats: tọghata video ka QuickTime MOV, M4V, MP4, AVI, MKV, WMV, na ndị ọzọ.
Professional Video Ntụgharị: Ị nwere ike nweta converted faịlụ enweghị ihe ọ bụla àgwà ọnwụ. Ọbụna na ọ nwere ike tọghata 3D na HD videos.
Kasị Nchigharị Speed: jiri ya tụnyere ndị ọzọ na asọmpi, ọ na-atọghata videos na 30X kasị akakabarede ọsọ.
Ike DVD burner: Ọ asakde video ọ bụla usoro DVD na elu mma.
iTunes Video Metadata Editor: Ọ nwere ike tinye ma dezie metadata (nkọwa, omee, omee, wdg) ka ọ bụla nke gị ebudatara videos.
Olee otú iji tọghata WMV ka iTunes Na Wondershare Video Ntụgharị
Iji ihe ọ bụla otu n'ime ụzọ atọ n'okpuru ime nke a Job, sị:
See button mbubata WMV faịlụ ka ngwa a.
See "Tinye Files" nhọrọ a ngwa si ebi ndụ mbubata gị chọrọ WMV vidiyo na ngwa a.
Dọrọ na dobe WMV faịlụ i chọrọ nke a ngwa
A na ngwa na-akwado ogbe akakabarede. Ị nwere ike mbubata na tọghata ọtụtụ WMV faịlụ na oge.
Dị ka e kwuru n'elu, iTunes akwado MPEG-4 na MOV, MP4, M4V usoro. Ebe a, anyị na-MP4 ihe atụ.
Na n'akụkụ aka nri nke interface, see "mmepụta Format" bọtịnụ gbapụta mmepụta format window. Ebe a, i nwere ike imeghe format ndọpụta ndepụta iji họrọ MP4 n'okpuru udi nke "Format"> "Video". N'ezie, i nwere ike na-aga "Apple" Atiya iji họrọ onye ọ bụla n'ime kpọmkwem-kachasị mmepụta format kama.
3. Play WMV na iTunes
Iji malite WMV ka iTunes akakabarede, dị nnọọ pịa "tọghata" button na ala-nri akuku nke a ngwa si ​​interface. Lee, nke a Video Ntụgharị na-converting WMV faịlụ na iTunes enyi na enyi usoro. Ị pụrụ ịhụ Percent Complete na fọdụrụ oge. Naanị ka a na ngwa na-agba ọsọ na ndabere.
Mgbe video akakabarede a mere, i nwere ike ịhụ na mmepụta faịlụ site ọkụkụ "Open nchekwa" button. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iji aka ịdọrọ mmepụta faịlụ site na mmepụta nchekwa iTunes n'ọbá akwụkwọ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike na-eche na-egwu WMV na iTunes!
Video Tutorial: Olee otú Jiri WMV ka iTunes Video Ntụgharị maka Windows
# 1. Free WMV ka iTunes Video Ntụgharị: Wondershare Video Converter Free
Chọrọ a FREE video akakabarede toolbox? Wondershare Video Converter Free Nwere ike ịbụ gị akpa oke. Ọ na-akwado ihe ọ nkịtị video na ọdịyo akakabarede. Ọbụna, i nwere ike iji ya dị ka a video nchịkọta akụkọ ma video Downloader. Dị nnọọ were ya na-ewepụtụ, akuku, tinye sobtaitel ma ọ bụ mmetụta gị video.
Cons: Nke a na-eji ngwa nanị na-ahapụ gị tọghata nkịtị videos, 3D na HD videos na-ekwe. Ọzọkwa ị nwere ike iji ya na-esure video ka DVD. Ihe kacha mkpa bụ na gị na isi iyi video àgwà nwere ike ida.
1. m ike imeghe WMV faịlụ na QuickTime.
QuickTime akwado MP4, M4V na MOV. Ọ na-adịghị akwado WMV. Ị pụrụ wụnye QuickTime components dị ka Perian ma ọ bụ Flip4Mac ịgbatị QuickTime akwado formats. Ma ọ bụ jiri a video Ntụgharị iji tọghata WMV ka QuickTime dakọtara formats.
Ebe ọ bụ na QuickTime ọkpụkpọ na-akwado mmachi videos, ị nwekwara ike na-agbalị ụfọdụ QuickTime uzo ozo ka ị na-egwu ndị ọzọ videos.
2.I apụghị ịdọrọ WMV faịlụ n'ime iTunes nkiri nchekwa maka management.
Ihe kpatara ya bụ na WMV na-adịghị iTunes akwado. Ị mkpa iji tọghata WMV ka iTunes dakọtara formats mbụ.
3. m nwere otutu WMV faịlụ na kọmputa m na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ọkpụkpọ ka m na-egwu ya na m iPhone na iPad.
E nwere ọtụtụ atọ - ọzọ video ọkpụkpọ ngwa ka ị na-ekiri vidio na ihe ọ bụla format na gị Apple ngwaọrụ. Dị na-agụ site na nke a n'isiokwu na Video Player égwu (iOS & Android).
Olee otú Jiri FLV Grabber
Olee otú iji tọghata Windows Live Movie Onye kere faịlụ ka AVI
Olee otú iji tọghata AVI ka VOB
> Resource> tọghata> Olee otú iji Play WMV na iTunes